कांग्रेस दिनभरि वीपी, रातभरि विप्लव हो ? : मन्त्री बाँस्कोटा – Maitri News
कांग्रेस दिनभरि वीपी, रातभरि विप्लव हो ? : मन्त्री बाँस्कोटा
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवंसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेंसलाई नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
Previous Previous post: दूतावासको पत्रबारे समयमै जानकारी नदिनेलाई कारवाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
Next Next post: हरिशयनी एकादशीः घरघरमा तुलसी रोपियो